Qarax lala eegtay AMISOM | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Qarax lala eegtay AMISOM
Qarax lala eegtay AMISOM
Kolonyo Gaadiid ah oo ay wateen Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa qarax lagula eegtay inta u dhaxeysa degaanada Haansheekh iyo Golaley oo degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe u jira ku dhowaad 18-KM.
Jugta Qaraxan oo aad u cusleyd ayaa waxaa laga maqlay degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana Qaraxa nuuciisa uu ahaa Miinada nuuca dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago.
Dadka degaanka ayaa inoo sheegay Qaraxan in lala eegtay Ciidanka AMISOM balse aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray, maadaama qaraxa wadada lagu aasay uu dhacay markii ay gudbeen kolonyada Ciidanka AMISOM.
Qaraxa kadib rasaas Ciidamada Midowga Afirka ee AMISOM ayaa la sheegay inay fureen rasaas, taasi oo ay kaga jawaabayeen qaraxa Miinada ah eel ala eegtay, inkastoo rasaastaasi aysan jirin cid wax ku noqotay.
Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe oo aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino qaraxan ayaa ka gaabsaday in ay faah faahin ka bixiyaan qaraxan.
Inta badan ciidamada Al Shabaab ayaa qaraxyada noocaan oo kale ah u dhiga kolonyada gaadiidka Amisom ee wadadaasi ku safra.